Arimaha Bulshada: 8 Arimood Oo Sababa Burburka Qoysaska Qurbaha Wax Ka Ogow!! - Hablaha Media Network
Arimaha Bulshada: 8 Arimood Oo Sababa Burburka Qoysaska Qurbaha Wax Ka Ogow!!
HMN:- Dhaqaalaha:- Arinta ugu weyn ee lamaanayaashu isku qabsadaan ayaa ah lacagta. Qaasatan haddii hooyada ay shaqayso ayay arintu ku abuurtaa aabaha culeys iyo kalsooni daro. Waxaa kale oo dhibaato keenta haddii reerku ay ceyr qaataan. Xalka ayaa ah in arinta lacagta si wadajir looga wadahadlo, qaasatan in reerku ay samaystaan miisaaniyad muujinaysa halka qarashka lagu bixinayo. Muhiimadu waa in ay jidhaa is aaminaad iyo warbixinta oo la wadaago si qofkasta uu u ogaado jeebka kan kale.
Arinta kale ee culeyska weyn ku dhalisa qoysaska ayaa ah qaraabada, qaasatan kuwa ku nool Somalia oo reerka ka dhex abuura qilaaf ka dhalanaya qaasatan dhinaca dhaqaalaha. Maadaama qofkasta ay soo dirsadeen reer oo laga sugayo in uu lacag soo diro ayay keentaa in culeyska qaasatan la saaro ninka. Haddii uu shaqeeyo ayaa laga filayaa in uu taageero reerkiisa iyo reerka xaaska. Xalka arintaan ayaa noqon kara in laga wadahadlo arinta oo qaasatan dumarku ay fahmaan culeyska ay leedahay arinta reerka. Sidoo kale ninku waa in uu fahmaa in gabadha caruurta u haysa ay soo dirsadeen reer kiisa la mid ah.
3. Daryeelka caruurta iyo guriga:
Iyadoo Somalia markii la joogay ay hooyadu masuuliyada guriga lahayd ayaa marka qurbaha la yimid waxaa soo baxday in ninku uu qeybtiisa ka qaato ilaalinta caruurta iyo shaqada guriga. Inkastoo diin ahaan ay tahay arin haboon ayay hadana taasi ragg badan oo Soomaali ah ku dhalisay culeys aysan horay u aqoon. Arintaan xalkeeda ayaa ah in aabaha uu aqoonsado in uu masuuliyadiisa qaato oo arintaan aysan ahayn ceeb balse ay tahay qeyb ka mid ah shaqadiisa. Dumarka ayaa laga doonayaa in aysan ninka ku riixin arintaan oo aysan cadaadis ku saarin balse si wanaag ah iyo isfahan ah ay kaga dhaadhiciso in uu shaqada wax ka qabto.
4. Cadaadis (Stress):
Nolosha iyo shaqada kadeedka ah ee qurbaha ayaa Soomaalida bartay eray cusub oo loo yaqaan Stress kaasoo keena in qofku uu dareemo kadeed iyo in uusan dhamaystiri karin hawsha u taala. Marka ay isku yimaadaan shaqada, iskuulka, caruurta, guriga, xaaska iwm ayay keentaa in dadka qaar ay nervoos noqdaan oo sidaas uu ku dhasho qilaaf. Xalka arintaan ayaa ah mid adag haddii uusan qofka ahayn mid ku wanaagsan xagamaynta cadaadiska balse waxaad samayn kartaa in aad waqti u kala samayso hawlaha kuu yaala oo midkasta aad waqtigeeda fuliso. Lamaanaha kale ayaa laga doonayaa in haddii uu dareemo seyga ama xaaska uu saaranyahay cadaadis uusan cadaadis kale sii saarin.
Arintaan ayaa ah mid qatar ah oo keenta burburka qoysas badan, iyadoo ay Soomaaliya jireen ragg gacanta u qaada xaaskooda ayay hadana dabeecadii halkaan la yimaadaan. Gacanta keliya ma ahan balse aflagaadada iyo niyad dilka ayaa noqon kara nuuc ka mid ah dilka. Sida aad wada ogtihiin wadamada reer galbeedka waa ka mamnuuc dilka iyadoo keeni karta burbur degdeg ah oo qoyska ku yimaadaa.
6. Kala qeyb sanaan aragtida diinta:
Maadaama ay sanadihii dambe soo bexeen fikrado kala duwan oo xaga diinta ah ayaa hadana tani ka dhex dhalatay qoysas horay u dhisnaa iyo kuwa cusub. Qof ayaa laga yaabaa in uu aaminsanyahay koox gaar ah halka kan kalena uu raacsanyahay koox kale. Arintaan ayaa ah mid muhiim ah in laga wada hadlo. oo qaasatan haddii ay reerku fikrada diinta ku kala duwanyihiin ay ku heshiiyaan kalaamka Allah iyo sunada nabiga (nnkh). Wixii intaas ka hooseeyana aysan ka wada hadlin.
7. Galmo la’aan:
Arintaan ayaa ah mid aysan qaasatan Soomaalidu ka wada hadlin balse ah arin aad u muhiim ah. Lamaanayaasha ayay muhiimtahay in ay aqoonsadaan muhiimada arintaan iyo in xalkeeda uu yahay in ay isqanciyaan. Ceeb ma ahan in laga hadlo oo xitaa la yeesho habeen gaar ah oo isku day la sameeyo. Guurka waa in uu yahay mid ku dhisan jaceyl, galmaduna waxay ka midtahay astaamaha jaceylka lamaanayaasha.
8. Kala duwanaasho nolosha:
Qoysaska qaar ayaa ah kuwo ay lamaanayaashu ay aad u kala duwanyihin, haddii ay ahaan lahayd in labada qof uu midkood ajanabi yahay, ama in midkood uu qurbaha ku dhashay kan kalena uu Somalia ku koray. Guud ahaan kala duwanaashaha ayaa noqon kara arin abuurta qilaafaadka iyo isfahandaro. Xalka ayaa ah in haddii aad galayso guur nuucaas ah aad u diyaar garowdo kala duwanaashaha isla markaana aad xushmayso fikrada iyo qaab dhaqanka qofka kale. Balse aad isugu timaadaan wixii diintu qabto, kana dheeraataan wixii ay mamnuucday.